Ambarao Amin’ny Alalan’ny StoryMaker Ny Tantaranao Ary Mahazoa €1000 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Aogositra 2013 23:30 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, فارسی, русский, Français, Español, اردو, Português, Italiano, Ελληνικά, srpski, हिन्दी, Swahili, বাংলা, македонски, English
Lahatsoratra efa navoaka tao amin'ny Free Press Unlimited.
Tetikasam-pampihatra vaovao avy amin'ny Free Press Unlimited natao ho an'ny finday ny StoryMaker. Manolotra lasitra fitantarana ao amin'ny asa fanaovan-gazety mampiasa fitaovana marolafy [multimédia] ity fampihatra ity. Vonona ho ampiasaina avy hatrany ny fampihatra ary azon'ny tsirairay trohina hitrandraham-baovao.
Mba handrisihana ny besinimaro hanandrana ny StoryMaker dia mikarakara fifaninanana izahay. Azonao atao ny mandraisa anjara ao amin'ny StoryMaker na mandefa aminay ny sosokevitra fanatsarana izany avy aminao.
Ny Fitantarana Tsara Indrindra
Hahazo loka €1000 ny fitantarana tsara indrindra mampiasa multimedia nampitaina tamin'ny alalan'ny Storymaker. Tafiditra avy hatrany ao anatin'ny fifaninanana ny tantara rehetra noraketina ao amin'ny www.storymaker.cc. Karohinay indrindra homenay izany loka izany ny fitantarana tsara indrindra izahay izay tsy nivoaka sy tsy fantatra raha tsy tamin'ny fampiasana ity fampihatra amin'ny finday ity.
Sosokevitra fanatsarana tsara indrindra
Vao avy nampahafantarina ny StoryMaker, saingy tsy midika izany fa tonga lafatra avokoa ny zava-drehetra [ao aminy]. Tsy izany mihitsy fa mila ireo mpampiasa izany izahay ho amin'ny fanatsarana ny Fampihatra. Aza misalasala mandefa aty aminay ny fanamarihana avy aminao, ny hevitra fanatsarana, na koa manamarika ireo fahadisoana mety ho hitanao, sns. Ampio izahay mba hahatonga ny StoryMaker hanana fahombiazana tsara. Misy ny loka €1000 homena amin'ny hevitra fanatsarana tsara indrindra. Manorata mailaka aminay ao amin'ny support [at] storymaker.cc .
Manana hatramin'ny 31 Desambra 2013 ianao amin'ny fandraisana anjara.
Vakio ny momba ny fandraisan'anjaran'ny Global Voices amin'ny Tetikasa StoryMaker